Champagne diamondra ho an'ny firavaka ho toy ny peratra, kavina an-kavina, fehin-tanana, rojo
Tags Champagne, diamondra
Ny diamondra Champagne dia iray amin'ireo diamondra fampiasa indrindra amin'ny firavaka, Matetika dia napetaka ho toy ny peratra, kavina kavina, peratra, rojo na pendant. Ny diamondra Champagne dia matetika apetraka amin'ny volamena mavokely ho toy ny peratra mofomamy na peratra mariazy ho solitaire.
Ny diamondra dia endriny mafy orina ny singa karbonina miaraka amina atiny amina endrika kristaly antsoina hoe cubic diamondra. Amin'ny hafanan'ny efitrano sy ny tsindry, ny karbonina mahery vaika hafa antsoina hoe grafit dia ny endrika simika simika, fa ny diamondra saika tsy miova amin'izany mihitsy. Ny diamondra dia manana ny hamafin'ny fikajiana sy ny haingam-pahefana avo indrindra amin'ny fitaovana voajanahary, ny fananana izay ampiasaina amin'ny rindranasa indostrialy lehibe toy ny fanendahana sy ny polish fitaovana. Izy ireo ihany koa no antony mahatonga ny sela anvil diamondra hamahana fitaovana hanerena azy ireo lalina.
Ny ankamaroan'ny diamondra champagne voajanahary dia manana taona eo anelanelan'ny 1 miliara ka hatramin'ny 3.5 miliara taona. Ny ankamaroany dia niforona tamin'ny halaliny teo anelanelan'ny 150 sy 250 kilometatra tamin'ny lamban'ny Tany, na dia vitsy aza ireo dia avy amin'ny halaviran'ny 800 kilometatra. Eo ambanin'ny tsindry avo be sy ny mari-pana, ny tsiranoka misy karbon dia levona mineraly ary soloina diamondra izy ireo. Vao haingana kokoa dia nentina tany amin'ny fipoahana volkano izy ireo ary napetraka tao anaty vatolampy mony antsoina hoe kimberlite sy lamproite.
Ny Nitrogen dia tsy fahita firy mahazatra indrindra hita ao amin'ny diamondra vatosoa ary tompon'andraikitra amin'ny loko mavo sy volontsôkôlà amin'ny diamondra.
Ravaka vita amin'ny diamondra
Ny diamondra simika dia afaka mamboly avy amin'ny karbonina fidiovana avo lenta amin'ny alàlan'ny tsindry avo be sy ny mari-pana na avy amin'ny gazy hidradradrahana amin'ny fandroahana setroka simika. Ny diamondra fanaka dia azo atao koa avy amin'ny fitaovana toy ny cubic zirconia sy silicon carbide. Ny diamondra voajanahary, synthetika ary menaka no tena manavaka azy amin'ny fampiasana teknika optika na fandrefesana fahaiza-mandry mafanama.
Mividianana diamondra voajanahary ao amin'ny magazinay
Izahay dia manao firavaka manokana amin'ny diamondra champagne ho toy ny peratra, kavina kavina, fehin-tanana, rojo na pendant. Ny diamondra Champagne dia matetika apetraka amin'ny volamena mavokely ho toy ny peratra miraikitra na peratra mariazy
Tags diamondra, Herkimer